Wasiir Maareeye oo fahmi la’ shaqadii uu u dirsaday RW Kheyre | Hohad News
Wasiir Maareeye oo fahmi la’ shaqadii uu u dirsaday RW Kheyre
Wasiirka Ganacsiga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa fahmi la’ shaqadii uu u dirsaday Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Wasiirka oo ay wasaaradiisa ku jirto xaalad u baahan badbaado iyo in laga joojiyo musuq maasuqa baahsan ee ka socdo ayaa ka hadlay Khilaafka ka taagan mushaaraadka Ciidamada Dowladda.
Wasiirkan Ganacsiga oo aanay quseyn arrinta ciidamada ayaa difaacayey wasiirka Maaliyadda oo uu kasoo xigtay in ciidamada ay qaateen mushaarkooda.
Wasiir Maareeye ayaa hanjabaad u diray Warbaahinta iyo Saraakiisha ciidamadad oo uu ku tilmaamay inay lacag ku qaateen sidii ay u buun buunin lahaayeen Ciidamada isaga soo baxay afaafka hore ee dagaalka kadib markii ay waayeen mushaaraadkooda.
Hadalka Wasiir Maareeye ayaa kusoo aadayo xilli ganacsatada Soomaaliyeed ay dhibaato ku qabaan wasaaradda uu Wasiirka u yahay oo ay ka jirto musuq maasuq iyo Laaluush.
Qofka u baahan inuu Wasaaradda ka helo waxyaabo la xiriiro ganacsigiisa ayaa Wasaaradda Ganacsiga kala kulmo dhibaato isugu jirto Laaluush iyo inaan loo qaban shaqadii uu wasaaradda uga baahnaa.
Qaar ka tirsan Hey’adaha ka shaqeeyo Muqdisho iyo ganacsatada ayaa Caasimadda Online u sheegay inuu Wasiir Maareeye bil kasta ka qaato lacago baad ah si ay shaqadooda ugu sii socoto.
Sidoo kale Wasiir Maareeye ayaa in ka badan 150 qof ka iibsaday si shaqsiyan ah Viisaha dalka Turkiga isagoo dadkaas u diiwaan geliyey inay ka qeyb galayaan shir ganacsi oo bilooyin ka hor ka dhacay Dalka Turkiga.
Dadkaas ayaa qofkiiba wuxuu wasiirka ka qaatay 5 Kun oo Dollar sida uu Caasimadda Online u xaqiijiyey mid kamid ah dadkaas oo Tahriib ku galay dalka Gariiga.
Dowladda Turkiga ayaa Wasaaradda Ganacsiga ka joojisay inay hadda kadib wafdi usoo dirto shirarka ganacsi ee dalkaas ka dhaco maadaama 150-kii qof ee dhawaan halkaas la geeyey aysan ka qeybgelin shirka sababtana waxay aheyd dadkaas oo dhammaantood ahaa kuwa rabo inay Wadamada Yurub usii tahriibaan.
Qaar ka tirsan Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dacwad ka dhan ah Wasiir Maareeye u gudbiyey Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kadib markii ay xoogeysatay musuq maasuqa ka socdo Wasaaradda Ganacsiga.
Waxaa wax lala yaabo ah inuu Wasiir Maareeye ka hadlo arrimo aan khuseyn oo dhanka Ciidamada iyo mushaaraadka ah iyadoo ay xaaladaan halista ah ku jirto Wasaaradda Ganacsiga ee Xukuumadda Soomaaliya.
Caasimadda Online ayaa dhawaan idiin soo bandhigi doonto Documentiyo muujinayo musuq maasuqa baahsan ee ka jiro wasaaradda Ganacsiga.